China JY-2120 silicone defoamer maka ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta ihe Juyou
JY-2120 silicone defoamer maka ọgwụ ahụhụ
JY-2120 bụ ụdị ọhụrụ na antifoam silicone antifoam dị mma nke ukwuu. Ezubere iji chịkwaa afụ mmiri na -egbu mmiri. Ngwaahịa a nwere ezigbo nguzogide acid na alkali, nkwụsi ike kemịkalụ na nguzogide ịkwa osisi, ọsọ defoaming ngwa ngwa yana njikwa afụ ogologo karịa nkezi. Enwere ike ịgbasa defoamer n'ụzọ dị mfe na sistemụ mmiri, ọkachasị dabara na nsị nsị nke chọrọ na pesticide nke dabeere na mmiri.
Nkebi NO \_ Ndepụta
Milky Ọcha Liquid
Ọdịnaya siri ike (%)
Viscosity (25 Celsius C, mpa.s)
Ụzọ ojiji na usoro onunu ogwu
1) Ịdị n'otu na -emegharị tupu iji. Iji nweta ịdịmma kacha mma, a ga -agbasasị onye nnọchi anya defoaming kpamkpam na ọkara ụfụfụ. Yabụ, ị nwekwara ike jiri mmiri oyi 1 - 5 ghaa mmiri tupu oge eruo, mgbe ị na -atụgharị antifoam ahụ, kwesịrị ịgbakwunye onye na -emebi ihe n'ime mmiri site na iji mmiri na -akpali akpali nwayọ wee jikọta ha. A ga -eji onye nnọchi defoaming diluted ozugbo.
2) Ọ bụrụ na sistemụ na-eji defoaming na-eji ngwakọta agwakọta ma ọ bụ tụgharịa ngwa (nwere ike ime ka onye na-ahụ maka nrụrụ gbasaa otu na ebe na-egbu maramara), enwere ike isonye onye na-emebi emebi ozugbo n'ime ihe na-egbu maramara, ọ dịghị mkpa ịgbanye.
3) N'okpuru mmetụta nke ihe ndị na -afụ ụfụfụ, ọnọdụ ịfụ ụfụfụ, charateristics kemịkalụ, ọdịnaya ụfụfụ, ihe dị iche na stiring wdg, ndị ahịa ga -eme atụmatụ itinye uche kwesịrị ekwesị.
1). Karịsịa maka ụdị ọgwụ ọ bụla na -egbu mmiri.
2). usoro mmiri ọzọ dabere na mmiri.
1), ngwaahịa a juputara na 25L, 50L, ma ọ bụ 200L plastik drum ma ọ bụ 200L ntụ ntụ mkpuchi drum,
2), ekwesịrị ịchekwa ngwaahịa a na ikuku ikuku, kwesịrị ịchekwa ya na ebe dị jụụ, ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 25 ℃, kwesịrị igbochi oyi. Oge nchekwa bụ ọnwa isii.
3), ngwaahịa a dị ka ụlọ ahịa ngwongwo na-adịghị ize ndụ si dị.
Nke gara aga: Otu n'ime ihe kacha ewu ewu maka Silicone Lsr - JY -905 Skin simulation silicone rubber - JUYOU
Osote: JY-2120S onye nnọchi anya defoamer
KY-1077 Silicone surfactant adjuvants maka agro -...
JY-1027 siri ike Silicone surfactant adjuvants maka ...
JY-2120S onye nnọchi anya defoamer
JY-1028 Silicone surfactant adjuvants maka agro -...